Ma runbaa in Amazon com uu yahay mashiinka raadinta cusub ee alaabada?
Mararka qaar waxaan maqlaa dadka oo sheegaya in Amazon com uu yahay mashiinka raadinta cusub oo si khaas ah loogu talagalay alaabooyinka, halkii uu ku qeexi lahaa qeexitaankii hore ee adduunyaha ugu muhiimsan ee macaamilka ganacsiga iyo macaamilka ganacsiga. Sidaas, sida runta ah waa fikrad isbeddel ah oo ah in Amazon com u galay mashiinka search for alaabta - xitaa ka dhab ah oo aan ka fekereyno? Nasiib wanaag, waxaan heystaa weedho macquul ah oo laga soo xigtay daraasadda ugu dambaysay ee ku saabsan teknooloojiyada suuq-geynta internetka. Cilmi baaristan ayaa la sheegay in lagu fuliyay afar waddan oo kala duwan isla markaana u adeegsanaya isticmaalka dukaamada isla waqti isku mid ah. Iyo hoosta waxaan rabaa inaan ku tuso natiijooyin xiiso leh oo isku day inaad ka jawaabto su'aasha cinwaanka sheekadan.
More iyo Dad badan ayaa isticmaalaya Amazon com sida mashiinka raadinta macluumaadka sheyga. Baaritaanka suuq-geynta ayaa cilmibaaris suuq-gare ah ku lug leh hal kun oo macaamiisha ah oo ka yimid Mareykanka, iyo sidoo kale dukaamo la xidhiidha Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska - iyada oo ku dhowaad toddobo boqol oo jawaab bixiye ah dal kasta (taariikhda 2017 August):
In ka badan 70% dukaamada onlineka waxay booqdaan Amazon marka ugu horeysa iyo marka ugu horeysa, marka ay timaado in waxbadan laga barto alaabo gaar ah (sida qiimaha dhabta ah, dib u eegista macaamiisha, faahfaahinta alaabta, dhibcaha isticmaalka, iwm - odav rehvivahetus prnus. go'aanka ah inaad iibsato.
Ku dhowaad 25% oo ah dadka isticmaala firfircoon ee ku dhexjira tafaariiqda interneetka waxay dib u xaqiijiyeen in ay aadaan Amazon si ay wax badan uga ogaadaan alaabta ay u baahan yihiin, bartaan sifooyinka, qiimaha caadiga ah iyo waxyaabo kale - sida haddii ay waxay ku jireen dukaanka buluuga ah ee dhabta ah.
Qiyaastii 55% iibiyeyaasha firfircoon ee Amazon ayaa qirtay in loo isticmaalo in ay si toos ah u raadiyaan shaygooda bilawga ah, oo ku saabsan waxsoosa kasta oo laga helo iibka.
Iyadoo la tixgelinayo in Google weli wali qiyaastii 85% cilmi baarista macaamiisha la xidhiidha, farqigaas ayaa laga yaabaa inuu xiritaanka mar walba, iyada oo la sii wadi doono isbedel degdeg ah.
Waxaa jira dhinac cusub oo dukaamada tafaariiqda ah oo laga helay ganacsiyada ganacsiga iyo gaariga dukaamada wax iibsashada. Sida Amazon lafteeda, tani waa mid aad u qanacsan suuqa adduunka ugu caansan oo muujinaya in casriga loo beddelo sida aan u iibsano. Waxay macnaheedu tahay in dukaamo badan oo firfircooni ay si dhakhso ah ula qabsanayaan horumarka hadda jira ee raadinta mobile-saaxiibtinimo. Amazon waxay la socotaa mashiinka raadinta iyo qaababka algorithm-diirada saaran maaha mid ka baxsan xeerkan. Waxay macnaheedu tahay in dhammaan fikradaha casriga ah ama tafaariiqda iyo kor u qaadista internetka ay noqdaan kuwo isbedelaya.
Aan la kulanno - qaababka caadiga ah ee macaamiisha ayaa dhowaan isbeddelay si shahaado ah. Waxaan macnaheedu yahay in dukaanku caadi ahaan yahay inuu u badanyahay inuu abuuro ra'yigiisa isla markaana uu dhiso kalsoonidoon ku xiran dib-u-eegga badeecada iyo macluumaadka intiisa kale ee laga heli karo internetka, halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen shaqaalaha iibka nool. Iyadoo aan loo eegin sida ay u shaqeyn karaan shaqaalahaan - ganacsiga tafaariiqeed ee casriga ah ayaa wali la kulma xoqitaan buuxa ee goobaha jimicsiga, meelaha iyo iibinta dhibcooyinka.